किन निरन्तर शेयर बजारमा गिराउट ? यस्तो छ कारण -3ghumti
किन निरन्तर शेयर बजारमा गिराउट ?...
किन निरन्तर शेयर बजारमा गिराउट ? यस्तो छ कारण
आश्विन ५, २०७८ मंगलवार १३:४६ बजे
काठमाडौँ l ११४ दशमलव ०२ अंक अर्थात् ४ दशमलव ०५ प्रतिशतको पहिरोका साथ सोमवार नेप्से परिसूचक २ हजार ६९८ दशमलव २४ विन्दुमा झर्दा कूल ८ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
नेप्से परिसूचकमा पहिरो जाँदा पनि कारोबारको रकम ८ अर्बभन्दा बढी हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । सर्वसाधारण प्यानिक हुँदै अर्थात् तर्सेर आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सस्तोमा बेच्दैछन् भने ठूला लगानीकर्ता मौकाको फाइदा उठाउँदै कम मूल्यमा सर्वसाधारणको शेयर उठाउँदै छन् ।
बजारमा तरलताको अभाव हुँदा जसले शेयर होल्ड गर्न सक्छ, उसले नै फाइदा उठाउने भएकाले ठूला लगानीकर्ताहरुले शेयर बजार होल्ड गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण डराउँदै बेच्दै जाँदा नेप्से २५ सय अंकसम्म झरी पुनः ठूला लगानीकर्ताले तिहारपछि बेच्दै गई नाफा कमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।